Swaarm: gbanye ọrụ, bulie, ma tụọ arụmọrụ mgbasa ozi gị | Martech Zone
Swaarm: Na-arụ ọrụ, na-ebuli, ma tụọ arụmọrụ mgbasa ozi gị
Fraịde, Ọktọba 16, 2020 Fraịde, Ọktọba 16, 2020 Douglas Karr
Swaarm bụ usoro nlekota oru nke na-enye ndị ụlọ ọrụ, ndị mgbasa ozi, na netwọkụ ikike iji soro ma jikwaa ahịa ahịa ha n'oge na-eme ka mmụba bara uru.
Emebewo ikpo okwu site na ala iji mee ka ọ dị mfe iji, ma ọ dị ike, na-eji akpaka na-eme mkpọsa data iji nyere ndị ahịa aka ịlele ma bulie mkpọsa na ọnụahịa akụ na ụba.
Kama ibudata ụzọ, anyị wuru ngwaahịa a. Site na mbido, anyị malitere ịnwale ezigbo ndị ahịa iji mee ka omume ọ bụla dị mfe, ngwa ngwa, ma ka mma. Dị ka iOS na gam akporo dị na ekwentị anyị, anyị na-achọ ịbụ Sistemụ arụmọrụ nke arụmọrụ arụmọrụ.
Yogeeta Chainani, Onye nchoputa na CPO nke Swaarm
Unkpọghe uru nke data, Swaarm bụ ihe jikọrọ ọnụ, nke ụlọ ọrụ ahụ chọrọ iji dozie ụfọdụ nnukwu nsogbu nke ụlọ ọrụ ịbawanye azụmaahịa. Ọ bụ ezie na onyinye ahịa dị ugbu a na-enye nghọta nghọta pere mpe, ka na-achọ usoro ọrụ aka dị oke mkpa, ma jiri ụdị ọnụahịa adịghị arụ ọrụ, e wuru Swaarm iji merie isi ihe mgbu ndị a. Ikpo okwu na-enye ndị ụlọ ọrụ ohere ịme mkpebi na-eme data ma na-eme ka azụmahịa ha dịkwuo ọnụ ahịa site na ịnye ọkwa kachasị elu nke akpaaka.
Anyị belatara ego anyị ji akwụ ụgwọ nsụgharị na otu ụzọ n’ụzọ atọ site na ịkwaga Swaarm. N'otu oge, akụrụngwa akụrụngwa nyeere anyị aka ịbawanye arụmọrụ anyị nke rụpụtara ntinye ego nke 20%.
Thorsten Russ, Onye isi Nchịkwa, Evvolution
Swaarm Performance Marketing Akụkụ Gụnyere
Swaarm na-egbo mkpa nke ndị ahịa abụọ n'otu n'otu nwere ike ịnyagharị na ọtụtụ data site na ịpị aka ole na ole na ụlọ ọrụ data nwere ike iji ngwaọrụ sayensị data jikọtara ọnụ banye na granularities.
Mmekọrịta Onye Mmekọ - Na-enye ndị mmekọ ohere ịhụ nsuso & ọnụọgụ ego na oge.
Njikọ Smart - Inye CPM ndị mgbasa ozi mgbasa ozi ziri ezi maka onye ọrụ ziri ezi, dabere na algorithms mmụta igwe dị elu.
Inggba ụgwọ & nkwado - Mee ka ọnụọgụ ọnwa gị jikọtara ọnụ ọgụgụ nke ndị otu maka ịgba ụgwọ na ịrụ ọrụ ngwa ngwa.
Network mmekọrịta & Akpaghị aka Nye - Na-akpaghị aka na-ebubata ma melite onyinye sitere na ndị mmekọ dị ukwuu.
Real-oge akpaghị aka CR Optimization - Na-akpaghị aka na-eme ihe dabere na ezigbo oge data iji bulie okporo ụzọ.
Ezubere iche di elu - Mgbochi oge nke geo, ngwaọrụ, ụdị okporo ụzọ, ndị na-ebu ya, data data ọ bụla ọzọ.
Nyocha Insights - Chọpụta usoro, usoro, na ohere azụmaahịa na data gị, kesara ya na ndị ọrụ ibe gị.
24/7 Ndepụta njikọ Nyochaa - Chọpụta ma njikọ nsuso ọ dị mma maka onyinye ọ bụla na sistemụ gị.
Gaa Leta Swaarm Maka Ozi Ndị Ọzọ
Tags: arụmọrụ ngosiikpo okwu nyochamgbasa ozidigital mgbasa oziarụmọrụ arụmọrụarụmọrụ arụmọrụ n'elu ikpo okwuswaarm
RudderStack: Wulite Platform nke Onye Ahịa Gị (CDP)